တစ်​ခါကနှင့်​ အမှတ်​တရအပိုင်းအစများ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » တစ်​ခါကနှင့်​ အမှတ်​တရအပိုင်းအစများ (၁)	10
Posted by surmi on Dec 18, 2015 in Creative Writing | 10 comments
~~ တစ်​ခါကနှင့်​ သဲထိတ်​ရင်​ဖို ~~
​မောင်​ဆာမိငယ်​စဉ်​က ဂီတဝါသနာပါခဲ့ဖူးသည်​ ။
ဟို​အော်​ ဒီ​အော်​ အသံ​ကြောင်​ဖြင့်​ ဂစ်​တာတစ်​လုံးအ​ဖော်​ပြုလျှက်​ ရပ်​ကွက်​ထဲ ညစဉ်​နှိတ်​စက်​ခဲ့ဖူးသည်​ ။
ဒင်​ဒင်​ ​ဒေါင်​​ဒေါင်​ဟူ​သော ဂစ်​တာ​ခေါက်​သံကြားရသည်​နှင့်​ အပျို​လေးများမှအစ ၊ အပျိုကြီးအဆုံး အားလုံးတံခါးများပိတ်​ခြင်းဖြင့်​ သြဘာ​ပေးကြ​လေသည်​ ။
​မောင်​ဆာမိကား .. စိတ်​ဓတ်​မကျပါ ။
​အောက်​ပါသီချင်းအား အသံ​ကြောင်​ဖြင့်​ဟစ်​​ကြွေးလျှက်​ပင်​ အပြုံးမပျက်​ ….။
“” ~~ အချစ်​ ရှိရင်​ မီး​လေးဖွင့်​ကာ … လက်​ပြစမ်းပါဗျိုးးးးး ~~~
အချစ်​ရှိရင်​ .. တံခါး​လေးဖွင့်​ကာ လက်​ပြစမ်းပါဗျိုးးးး … ~~~
~~~ အချစ်​နဲ့ကျ​နော်​ .. ရီးစားမဖြစ်​ခင်​ .. ရင်းနှီးထားချင်​လို့ ~~~ ~~
~~ အချစ်​ရှိရင်​ .. မီး​လေးဖွင့်​ကာ တံခါး​လေးဖွင့်​ပါဗျိုးးးးးးးး … ~~~ “”
သီချင်​သံ ဆုံးသည်​နှင့်​ ……
” ဝုန်းးးးး ဒိုင်းးးးးး “”
ဟူ​သော ပြူတင်းတံခါး​ဆောင့်​ပိတ်​သံများ ​ပေါ်ထွက်​လာစမြဲ … ။
ဤမျှပင်​ ပရိတ်​သပ်​မှ ​ထောပနာပြုခြင်းကိုရရှိခဲ့​သည်​ ။
မည်​သို့ပင်​ဖြစ်​​စေ ​မောင်​ဆာမိတစ်​​ယောက်​မှာ ရပ်​ကွက်​အား နှိတ်​စက်​မြဲ နှိတ်​စက်​လျှက်​ရှိ​လေသည်​ ။
တစ်​​ခု​သော ညချမ်းအခါ၌ဖြစ်​သည်​ ။
ရပ်​ကွက်​ရုံးအနီး ​အော်​ကြီးဟစ်​ကျယ်​တီးခတ်​​နေစဉ်​ ရပ်​ကွက်​ရုံးမှ လာ​ရောက်​ပင့်​​ဆောင်​​လေ​တော့သည်​ ။
ထိုစဉ်​က စစ်​တပ်​မှအာဏာသိမ်းပြီးကာစ ၁၉၈၉ ခန့်​တွင်​ဖြစ်​၍ ရပ်​ကွက်​လူကြီးများ လက်​​စောင်းထက်​ချိန်​ပင်​တည်း ။
ရပ်​ကွက်​ရုံးခန်းတွင်း၌ ဥက္ကဌဆိုသူ၏ သြဝါဒအား နာရီဝက်​ခန့်​ကြားနာပြီး​နောက်​ …….
​မောင်​ဆာမိနှင့်​ ​သေ​ဖော်​ရှင်​ဖက်​နှစ်​ဦးအား လက်​မှတ်​ထိုးခံဝန်​ချုပ်​လုပ်​ခြင်းဖြင့်​ ရပ်​ကွက်​ဆိပ်​ငြိမ်​မှုအားထိမ်းသိမ်းခဲ့ကြ​လေသည်​ ။
အထက်​ပါကိစ္စများဖြစ်​ပွားပြီး​နောက်​ ​မောင်​ဆာမိမှာ မိခင်​ကြီး၏ညမထွက်​ရအမိန့်​​အောက်​၌ ​ခြေချုပ်​မိ​ခဲ့ရသည်​ ။
ရပ်​ကွက်​ကား ….. အထူးပင်​ဆိပ်​ငြိမ်​သွားရ​လေ၏ ။
​​မောင်​ဆာမိတစ်​​ယောက်​မှာ ညမိုးချုပ်​​လေတိုင်း ဝါသနာပိုးများထကြွ​သောင်းကျန်း​လျှက်​ရှိသည့်​အား​လျော်​စွာ တစ်​မျိုးကြံပြန်​သည်​ ။
ညအ​မှောင်​ထုကိုအကာအကွယ်​ယူ၍ ခြံအ​နောက်​ဖက်​ ခဲ (ဂဲ) တပစ်​လွတ်​စာအကွာမှ​နေ၍ ဆိုမြဲ တီးမြဲ ​အော်​ဟစ်​ဆဲ ………..။
…… အသံအနိမ့်​အမြင့်​အလွဲလွဲအ​ချော်​​ချော်​ ……. ​ညောင်​နာနာ​ အသံ​သေးအသံပြာ တို့အား ​လေသင့်​တိုင်းကြာရမည်​ဖြစ်​​လေ​တော့သည်​ ။
တစ်​​ခု​သော ည ကာလအခါတွင်​ဖြစ်​သည်​ ။
​ဇော်​ဝင်းထွဋ်​သီချင်းအား စိုင်းထီးဆိုင်​၏​လေယူ​လေသိမ်းဖြင့်​ ​အော်​ဟစ်​ပြီး​နောက်​ ​နံ​ဘေးမှ မီး​သေ​နေ​သော​ဆေး​ပေါ့လိပ်​တိုအား မီးညှိလိုက်​သည်​ ။
​ဆေးလိပ်​မီးညှိရင်း ​မျက်​စိ​ရှေ့ခတ်​​စောင်း​စောင်းခြံ​ထောင့်​သို့ ကြည့့်​မိသည်​တွင်​ …..
“” ဟိုက်​!!! ! ​သောက်​ပလုပ်​တုတ်​ !! “”
​ပါးစပ်​ထဲရှိမီးခိုးများပင်​ သီးသွားရသည်​ ။
မိမိမျက်​လုံးအား ပွတ်​သပ့််​၍ ​နောက်​ထပ်​ပြန်​ကြည့်​မိသည်​ ။
အိမ်​မက်​များ မက်​​နေ​လေ​ရော့သလား … ????
ခန္တာကိုယ်​တ​လျောက်​ ကြက်​သီးဖုများ ထလာခဲ့ရသည်​ ။
​ဆောင်း​ငွေ့သက်​​သော ​မြောက်​ပြန်​​လေသည်​ ​အေးစက်​မှင်​တက်​မိ​နေ​သော​မောင်​ဆာမိအား သြဘာ​ပေး​နေသ​ယောင်​ …..
​ကြောရိုးတစ်​​လျောက်​ ချမ်းစိမ့်​၍ လာ​သောအ​အေးဓတ်​သည်​ လက်​ဖျား​ခြေဖျားတို့အထိစီးဆင်း​လေ​တော့သည်​ ။
အမျိုးအမည်​မသိ​သော ပုပု​သေး​သေး အ​ကောင်​ငယ်​​လေးသုံး​ကောင်​တို့သည်​ ခြံ​ထောင့်​မှ ငှက်​​ပျောပင်​စုစုထဲတွင်​ လိုက်​တမ်း​ပြေးတမ်းကစား​နေခြင်းဖြစ​လေသည်​ ။
ကြွက်​ မဟုတ်​ပါ ။ ထို့အတူ ယုန်​လည်းမဟုတ်​ပါ ။ ယုန်​သာသာ အရွယ်​ရှိ ​ခြေလက်​တို့ပါ​သော ၊ မတ်​တပ်​ရပ်​လျှက်​​ပြေး​သော ၊ ငှက်​​ပျောပင်​အား ​ခြေနှစ်​ခြောင်းဖြင့်​​ပြေးတက်​တတ်​​သော ၊ ဦး​ခေါင်း ခတ်​ဝိုင်းရှိ​လေ​သော နာမည်​မ​ဖော်​နိုင်​​သော သတ္တဝါ​လေးများ​ဖြစ်​​လေ​တော့သည်​ ။
ဤမြင်​ကွင်းတို့အားထင်​ရှားစွာ​တွေ့ရပြီး​နောက်​ ​မောင်​ဆာမိလည်း အိမ်​အတွင်းသုိ့ ကသုတ်​ကယက်​​ပြေးဝင်​​လေ​တော့သည်​ ။
​မောင်​ဆာမိ သရဲမ​ကြောက်​တတ်​ပါ ။
ထို့အတူ သရဲဟူသည့့်​သတ္တဝါအားလည်း မမြင်​ဖူးပါ ။
သို့​သော်​ ထိုခဏ၌ ကြားဖူးနားဝ ရှိ​သောပုံတိုပတ်​စများထဲမှ “မှင်​စာများ ​မြေဘုတ်​များ” အား သတိယမိ​လေ​တော့သည်​ ။
​မောင်​ဆာမိအား မိခင်​ကြီးမှ ကံနိမ့်​​နေသည်​ဟူ​သောအ​ကြောင်းပြချက်​ဖြင့်​ တရားရိပ်​သာသို့ တစ်​လစခန်းသွင်းခြင်းဖြင့်​ ပို့​ဆောင်​လိုက်​​လေ​သည်​ ။
ဤသို့လျှင်​ သဲထိတ်​ရင်​ဖိုမှသည်​ မဟာသတိပဌန်​အကျင့်​မြတ်​စခန်းသို့ သွား​ရောက်​ခဲ့ရ​လေ​သော အဖြစ်​အပျက်​များပင်​ဖြစ်​​ပေ​တော့သည်​ ။
kai says: တကောင်… ဒေါ်လာ၁သန်းအသာလေးပဲ..။
ဒီလောက်ကံတက်နေတာကို… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -သဂျီး အာ့လို ပြောမယ်မှန်းသများသိပီးသား
E.မြောက်မြောက် says: ဒီမှင်စာ အိုင်ခုနဲ့ ပေးတွေ့လိုက်လို့ကတော့
မီလျံ ဘီစကွတ် အဲ ဘိစနက်ပဲ
မဂ္ဂဇင်းမထုတ်ပဲ မှင်စာတွေချည်း မျိုးဖောက်ပြီး
ရုံသွင်း ပြစားမယ် တကဲကဲလုပ်နေမှာ မျင်ရောင်သေး
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ဒါ ….
ကလေးလေးတွေ အစိမ်းသေရင် ဖစ်တာ။
ပုံ/ ၁၃ ကြိုး
Mike says: .ဟီဟိ..ကိုဆာမိကံတက်တာတဲ့…ဟုတ်သား..လိုက်ဖမ်းထားလိုက်ရမှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: အူးဇံ ဒူးပျံ မူးလှံ ခြူးစံ..
မြစပဲရိုး says: ခရီးတို က ပြန်လာလို့ နောက်မှ ပြန်လာမန့် မယ်။ :-)
အောင် မိုးသူ says: ကျတော်တို့ရပ်ကွက်ထဲမှာလည်း လေးငါးကောင်ထပ်မနည်း တွေ့ဖူးကြတယ်။ မှင်စာလေးတွေ နေမှာပေါ့။
alinsett says: သရဲတို့ ဘာတို့…မှင်စာတို့….
အဲ့လို ပရလောကသားဆိုတာတွေကို ..ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ..ကိုယ်တိုင် မျက်စိနဲ့ တပ်အပ် မမြင်ဖူးရှာတဲ့ ကျနော်…
ကံ အတော် မြင့်နေသလားမသိ…. ကျနော့်မှာဖြင့်….အပြင်မှာ မမြင်ဖူးတိုင်း… ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေ…ကြည့်ကြည့်ပြီး အာသာဖြေရတာ အမော…
မြစပဲရိုး says: မှင်စာလေးတွေ က တောင် အားပေးကြတယ် ဆိုမှတော့ နဲ တဲ့ပါရမီ မဟုတ်ပါလားရှင်။
ဂီတလောက ထဲ ကိုယ်လုံးပစ် ဝင်လိုက်ရင် ပေါက် မှာကို။ :-))))